‘पियाजियो’ थ्री ह्वीलरले २ वर्षभित्र महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउनेछ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता ‘पियाजियो’ थ्री ह्वीलरले २ वर्षभित्र महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउनेछ
अन्तरवार्ता 68 views
विवेक दुगड उपाध्यक्ष एमभी दुगड ग्रूप
दुगड ग्रूपले आफ्नो क्षेत्रका ठूला तथा प्रविधिमा लीडर रहेका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालमा १ सय ४५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएको यस ग्रूपका अहिले महिन्द्रा, जोन डियर, रोयल इनफिल्डलगायत ठूला कम्पनीसँग सहकार्य छ भने यही फागुनदेखि इटालियन ब्राण्ड पियाजियोका थ्री ह्वीलर गाडीको विक्री शुरू गरेको छ । यसले प्यासेञ्जर सेग्मेण्टको एपेसिटी तथा कार्गो सेग्मेण्टको एपेकार्गो थ्री ह्वीलरको विक्री गर्नेछ । ‘पियाजियो’ थ्री ह्वीलरका साथै समग्र बजारको वर्तमान अवस्था, समस्या र सम्भावनाबारे ग्रूपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडसँग आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानी :
नेपालमा थ्री ह्वीलरको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा विगत २ वर्षदेखि थ्री ह्वीलरको बजार धेरै नै बढेको छ । यसको मुख्य कारण हो– सडक विस्तारमा तीव्रता । अहिले हुलाकी, मध्य पहाडीलगायत सडक पूर्वाधारको विकासले धेरै गाउँ शहरसँग जोडिएका छन् । सडक निर्माणपछि मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सबैभन्दा सजिलो विकल्प थ्री ह्वीलर नै हो । अरू सवारीसाधनको तुलनामा थ्री ह्वीलर सस्तो पर्ने भएकोले यसको माग अहिले बढेको छ । साथै, थ्री ह्वीलरमा आफ्नो सानो परिवार बसेर सजिलोसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ । नेपालमा पेट्रोल थ्री ह्वीलर आएपछि यसलाई धेरैले रुचाएको पनि पाइएको छ । अहिले यसले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा सन् २०१६ मा करीब ५ हजार थ्री ह्वीलरको माग थियो भने सन् २०१७ मा बजार बढेर करीब ९ हजार पुगेको छ । तराई तथा साना ठाउँका सर्वसाधारणका लागि यो उपयुक्त सवारीसाधनको रूपमा रहेको छ ।
थ्री ह्वीलरले धेरै नेपालीलाई स्वरोजगार बन्न कसरी सघाइरहेको छ ?
सरकार तथा हामी व्यवसायीको सबै नेपालीलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने भन्ने लक्ष्य पनि हुन्छ । थ्री ह्वीलरले धेरै नेपालीलाई परिवार पाल्नका साथै आफ्नो स्तर माथि उठाउन सघाइरहेको छ । यसको मूल्य धेरै नभएकाले अहिले धेरै नेपालीले केही पैसा लगानी गरी आफै चलाएर बैङ्कको किस्ता तिर्नुका साथै परिवारका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । यसले ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका नेपालीलाई देशमै स्वरोजगार बन्न ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । यो प्रयोग गर्ने मान्छे र चलाउने दुवैलाई धेरै नै फाइदाजनक छ । चलाउने मान्छेले स्वरोजगार बन्न पाउने तथा हामी चढ्ने मान्छेले सस्तोमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने माध्यम पाएका छौं, जुन नेपालमा २ वर्ष अगाडि थिएन ।
दुगड ग्रूपले बजारमा ल्याएको पियाजियो थ्री ह्वीलरका विशेषता के हुन् ?
पियाजियो थ्री ह्वीलरको जन्मदाता हो । थ्री ह्वीलर बनाउन शुरू गरेको नै पियाजियो कम्पनीले हो । यो इटालियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । इटालियनहरू आफ्नो डिजाइन तथा प्रविधि दुवैका लागि विश्वमै प्रसिद्घ छन् । यसको डिजाइन एकदमै उत्कृष्ट छ । साथै, यसको इञ्जिनमा भएको प्रविधि अत्याधुनिक छ । यसले गर्दा पियाजियो कम्पनीले थ्री ह्वीलर सेग्मेण्टमा सबैभन्दा राम्रो प्रडक्ट दिइरहेको छ । हामीले पियाजियो कम्पनीसँग सहकार्य गर्न खोजेका थियौं । पियाजियो जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली मार्केटका लागि एमभी दुगड ग्रूपअन्तर्गतको विवेक अटोमोबाइल्सलाई छनोट गरेकोमा हामी खुशी छौं । पियाजियोे टिकाउपन, प्रविधि, डिजाइन तथा हाम्रो नेटवर्क र ४७ वर्षदेखिको अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अनुभवले हामी नेपाली जनतालाई राम्रो प्रडक्ट र सर्भिस दिन सक्षम हुनेछौं, जसले हामीप्रति यसका उपभोक्ताको विश्वास अझै बढ्नेछ ।
दुगड ग्रूपले पियाजियो कम्पनीस“ग सहकार्य गर्नुको कारण के हो ?
दुगड ग्रूपको सिद्धान्त नै यो छ– हामी आफ्नो क्षेत्रका ठूला तथा प्रविधिमा लीडर रहेका कम्पनीसँग मात्र सहकार्य गर्छौं । आज हामीले प्रतिनिधित्व गरेका सबै कम्पनी महिन्द्रा, जोन डियर, रोयल इनफिल्ड र अब पियाजियो सबै प्रविधि तथा प्रडक्टमा एक नम्बर छन् । हाम्रो ग्रूपको नेपालमा १ सय ४५ वर्षभन्दा बढीको जुन इज्जत छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन यस्तै प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ, जसले नेपालका जनतालाई फाइदा पु¥याओस् । हामी जुन पायो त्यही कम्पनी लिएर आउँदैनौं ।
तपाईंहरू पियाजियो ब्राण्डका कस्ता कस्ता साधन बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
हामी पियाजियो ब्राण्डका प्यासेञ्जर तथा कार्गो दुवैथरी थ्री ह्वीलर विक्री गर्दै छौं । हामीलाई आशा छ, यसले बजारमा सबै जनाको राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेछ । हामीले प्यासेञ्जर सेग्मेण्टको एपेसीटी मोडलको थ्री ह्वीलरको विक्री यही फागुन १ गतेदेखि शुरू गर्‍यौं । त्यस्तै, कार्गो सेग्मेण्टको एपेकार्गो थ्री ह्वीलरको विक्री पनि १/२ हप्ताभित्रै शुरू गर्दै छौं ।
एपेसीटी मोडलबारे थप जानकारी दिनुहोस् न ?
एपेसीटी मोडलको नेपाली बजारमा मूल्य ५ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । यसमा चालकवाहेक तीनजना अटाउने क्षमता हुन्छ । यसको इञ्जिन प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीको भन्दा धेरै राम्रो छ । अन्य कम्पनीको इञ्जिन ५/६ महीनामा खोल्नुपर्छ भने हाम्रो १ वर्षसम्म खोल्नुपर्दैन । यसको बडी फलामबाट बनाइएको हुन्छ । यसले गर्दा पियाजियोको लगानी तथा मर्मत खर्च एकदमै कम छ ।
एपेकार्गो नि ?
पियाजियोले नै सबैभन्दा पहिले कार्गो सेगमेण्टको थ्री ह्वीलर विश्वबजारमा ल्याएको हो । पियाजियोको भारतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा छ । कार्गो सेग्मेण्टमा पियाजियोलाई कसैले पनि भेट्टाउन सकेको छैन । कार्गो थ्री ह्वीलरले पनि नेपालमा धेरै राम्रो बजार लिनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ । अहिले नेपालका साना साना शहरमा कम मूल्यमा सामान ढुवानी गर्न सकिने सवारीसाधनको खाँचो छ । एपेकार्गोको बजार मूल्य करीब साढे ५ देखि ६ लाख रुपैयाँकै बीचमा पर्छ । अन्य ब्राण्डका कार्गो भेहिकलको मूल्य १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नै छ । त्यसैले, नेपालीले सस्तो तथा भरपर्दो ढुवानीको साधन पाउनेछन् । यस्ता साधन धेरैजसो आफै किनेर चलाउने गरेको पाइन्छ । यसले खरीदकर्ताको आम्दानी बढाउनेछ । यसको मर्मत खर्च कम लाग्ने कारणले जीवनस्तर माथि ल्याउन सघाउनेछ । हामीलाई कार्गो थ्री ह्वीलरका माध्यमबाट नेपालीको आम्दानी बढाउन पाउँदा खुशी लागेको छ । कार्गो थ्री ह्वीलरमा ४ सयदेखि ५ सय केजीसम्म सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ ।
एपेकार्गोबाट उपभोक्ता कसरी लाभान्वित हुनेछन् ?
नेपालका साना शहरबाट मानिसलाई धेरै सामान लैजानुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । थोरै सामानलाई ठूला गाडीबाट लैजाँदा ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ । एपेकार्गोले मानिसले थोरै थोरै सामान किनेर आफ्नो पसलमा लैजान तथा दूध, तरकारीको ओसारपसार गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ । यसले ढुवानी खर्च जोगाउने भएकोले नयाँ बजार सृजना गर्नेछ । यो बजारमा आएपछि सर्वसाधारण, किसान तथा पसल सञ्चालन गर्नेले सस्तोमा आफ्नो सामान ढुवानी गर्न सकेका छन् । थ्री ह्वीलर कार्गो पहिलोपटक हामी नेपाली बजारमा ल्याउन लागेका छौं । थ्री ह्वीलर प्यासेञ्जर गाडी वेल्डिङ गरेर पनि कसैले बनाउन सक्छ । तर, कार्गो गाडीमा ५ सय केजीभन्दा बढी वजन हुने भएकोले टिकाउपन नभएको गाडी चल्न सक्दैन । त्यसैले, प्रतिस्पर्धीले आजसम्म यस सेग्मेण्टमा पियाजियोलाई चुनौती दिन सकेको छैन, जसले गर्दा भारत जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पनि ८० प्रतिशत बजार लिन सफल भएको हो ।
पियाजियोको बजार विस्तार योजना तथा विक्रीपछिको सेवा कस्तो छ ?
बजार विस्तार गर्ने हाम्रो एग्रेसिभ योजना छ । हामी नेपालभर ३० ओटा ठाउँमा २/३ महीनाभित्रै शोरूम खोल्नेछौं । साथै, यी सबै ठाउँमा थ्रीएस (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स)सहितको सुविधा उपलब्ध गराउनेछौं, जसबाट सबै ठाउँका उपभोक्ताले आफ्नो घर नजीकैबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्सको सुविधा पाउनेछन् । कार्गोका खरीदकर्ताले प्रत्येक दिन सामान ढुवानी गरेर पैसा कमाउनुपर्ने हुन्छ । यदि कार्गो गाडीलाई पार्ट्स नपाएर धेरै टाढा सर्भिस गराउन लैजानुपर्‍यो भने यसका खरीदकर्तालाई किस्ता तिर्न तथा घर परिवार पाल्न समस्या पर्छ । त्यसैले, हामीले यो समस्या बुझेर धेरै ठाउँमा सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छौं । पियाजियोका थ्री ह्वीलरले अबको २ वषभित्र नेपाली बजारमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउनेछ । सन् २०१८ मा ३० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने र २ वर्षमा बजारको नेतृत्वकर्ता बन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
ग्रूपका अन्य योजना के–के छन् ?
यसपछि हामी छिट्टै इलेक्ट्रिक अटो बजारमा ल्याउनेछौं । यो पाइलट प्रोजेक्टअनुसार गर्छौं । किनकि इलेक्ट्रिक अटो अहिलेसम्म नेपाली बजारमा छैन । अहिले जुन ई–रिक्सा बजारमा आएको छ, त्यसले गर्दा धेरै मानिसलाई समस्या भइरहेको छ । ई¬रिक्साको गति कम हुने तथा सुरक्षामा ध्यान नदिई बनाइएकोले धेरैलाई समस्या पर्ने गरेको हो । यसमा फलाम जोडर सीधै बनाइने गरेको पाइन्छ । यात्राका लागि यो आरामदायी पनि हुँदैन । पियाजियो कम्पनी प्रविधिमा लीडर भएकोले यसले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि राम्रो गर्दै छ । हामी छिट्टै ई¬अटो भनेर बजारमा यसको लञ्च गर्नेछौं । यो पेट्रोल अटोजस्तै हुनेछ । यसमा स्पीड, टिकाउपन तथा आरामदायी सबै सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पेट्रोल र इलेक्ट्रिक अटोमा कुनै फरक हुँदैन । यसलाई ठूलो स्केलमा बजारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ ।
पियाजियो ब्राण्डकै ई¬अटो पनि ल्याउने योजना बनाउनुभएको छ । तर, इलेक्ट्रिक भेहिकल सञ्चालनका लागि नेपालमा कुनै सुविधा छैन नि ?
इलेक्ट्रिक भेहिकलका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या चार्जिङ स्टेशनको छ । नेपालमा अहिले चार्जिङ स्टेशन छैनन् । त्यस कारण हामी पियाजियो कम्पनीसँग मिलेर एक/दुई ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्ट गर्छौं । पाइलट प्रोजेक्ट सफल भयो भने नेपालभर यसलाई लैजानेछौं । यदि यो सफल भयो भने नेपालमा यो क्रान्तिकारी कदम हुनेछ । नेपालले भविष्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने भनेर हामी भनिरहेका छौं । तर, यसले धेरै विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ । नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा धेरै पैसा बाहिर गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । नेपालले आयात गर्ने वस्तुको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा पर्छ । यदि ई(अटोको प्रोजेक्ट सफल भयो भने नेपालको व्यापार घाटा घटाउन यसले सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
अटो मोबाइल व्यवसायको बजारीकरणमा देखिएका अपठ्यारा के के छन् ? यसको समाधानमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?
डिजेल अटो भएको बेलामा थ्री ह्वीलरले प्रदूषण फैलाउँछ भन्ने गलत धारणा आम मानिसमा भएको पाइन्छ । वास्तविक रूपमा भन्नुहुन्छ भने १ लिटरमा २५ देखि ३० किलोमिटर गुड्ने गाडीले कसरी प्रदूषण फैलाउँछ । कारले १ लिटरमा ८–१० किमीभन्दा बढी माइलेज दिँदैन । तर, उसको प्रदूषण सबैभन्दा कम मानिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको राम्रो विकास भएको छैन । गरीब तथा मध्यम वर्गका मानिसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सस्तोमा प्रयोग गर्न सक्ने साधनको उपलब्धता कसरी बढाउने भन्ने चुनौती छ । अहिले नेपालमा सबैलाई मोटरसाइकल किन्नु बाध्यताजस्तो भइसकेको छ । सबैले, मोटरसाइकल किन्दा देशको ठूलो रकम बाहिर जान्छ । यस्तो थ्री ह्वीलरको सुविधा मानिसले पाएपछि मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनमाथिको निर्भरता घट्नेछ । गाडीको सङ्ख्या घटदा प्रदूषण पनि घट्छ । सबैलाई गाडी किन्नैपर्ने बाध्यता पनि हट्छ । डिजेल अटो भएको बेलामा थ्री ह्वीलरप्रति भएको धारणा अहिले पेट्रोल अटोमा छैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । आज भारतका ठूला शहरहरू दिल्ली, मुम्बईलगायतमा पनि पेट्रोल अटो नै चल्छन् । ती शहरमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कडा नियम भएको भए पनि यसलाई राम्रो मानेर चल्न दिइन्छ । सर्वसाधारणलाई स्वरोजगारी तथा सस्तोमा यात्रा गर्न दिने भएकोले यसलाई महत्त्वदिनुपर्छ । आज पनि गाडीमा १ सय प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार सरकारले लिने गरेको छ । यसको भन्सार सरकारले कम गर्‍यो भने उपभोक्ताले अझै सस्तोमा किन्न पाउनेछन् । यसले गर्दा भाडा पनि घट्छ । सरकारले थ्री ह्वीलर आयातलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीका लागि यो धेरै राम्रो माध्यम हो ।